Fiaramanidina tsy mitongilana karbaona - Lufthansa Compensaid dia azon'ny mpanjifa orinasa izao. Vaovao momba ny fiaramanidina
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny dia any Eropa • Vaovao Alemanina • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Teknolojia fitsangatsanganana • Travel Wire News
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fiaramanidina tsy miandany amin'ny karbona - Lufthansa Compensaid efa azon'ny mpanjifa orinasa izao » Page 2
“Ny faharetana amin'ny ankapobeny sy ny fanoherana ny fiovan'ny toetrandro dia lafiny iray lehibe amin'ny tetikadin'ny AXA. Ny ekipa maharitra maharitra sy ny AXA Innovation Campus dia eo am-pitadiavana ireo hevitra vaovao ary ny tolotra Compensaid an'i Lufthansa dia tonga tamin'ny fotoana mety ho antsika. Ny fandefasana ny gazy karbonika amin'ny ho avy ateraky ny sidina ataontsika dia dingana iray hafa manakana ny fampihenana ny dian-tongan'ny karbaona antsika ary ny tady iray hafa amin'ny tsorinay amin'ny fahatapahan-kevitsika hanatratra ny dia tsy miankina amin'ny karbaona », hoy ny fanazavan'i Sirka Laudon, Head of People Experience ary tompon'andraikitra amin'ny AXA Germany Tetikasa maharitra.
Solika maharitra maharitra dia manondro solika maharitra, tsy misy fôsily. Amin'izao fotoana izao dia avy amin'ny biomassa indrindra izy io, toy ny menaka fahandro efa niasa. SAF dia safidy tena izy amin'ny solika fiaramanidina mifototra amin'ny karbaona ary, amin'ny fotoana maharitra, dia afaka mamela fiaramanidina tsy miandany CO2.
Ankoatry ny fampiasana SAF, Compensaid dia mamela ihany koa ny offsetting amin'ny alàlan'ny tetikasa fiarovana ny toetrandro voamarina. Anisan'izany, ohatra, ny fampiroboroboana ny rafitra photovoltaic, ny fampiasana fatana mahomby izay mitaky kitay kely kokoa ary noho izany dia mamoaka CO2 kely kokoa amin'ny atmosfera, na ny fanoloana ireo mpamokatra gazoala amin'ny rafitra mamokatra herinaratra avy amin'ny biomassa. Ireo orinasa mandray anjara amin'ny "Programme Corporate Compensaid" dia afaka misafidy ny tetikasa mifanaraka amin'izy ireo.
Compensaid ho toy ny tolotra onitra afovoan'ny Vondrona Lufthansa
Ny Lufthansa Innovation Hub dia nanangana ny sehatra onitra nomerika Compensaid tamin'ny taona 2019. Nanomboka teo dia nitarina tsikelikely izy io mba hahitana vokatra fanampiny. Na inona na inona fiaramanidina fidiny, ny mpandeha manokana dia afaka manisa ny fandefasana CO2 marina amin'ny sidiny ary manonitra azy ireo amin'ny alàlan'ny fomba hafa voalaza etsy ambony. Ny seranam-piaramanidina Lufthansa Group dia nampiditra Compensaid mivantana tamin'ny fizotran'ny famandrihana. Ireo flyer matetika koa dia hahita ity safidy ity ao amin'ny fampiharana Miles & More. Lufthansa Cargo dia mampiasa vahaolana fanonerana ho an'ny zotram-piaramanidina tsy miandany ihany koa. Tamin'ny volana novambra 2, ny Lufthansa Cargo dia nampandeha ny sidina CO2020-neutre voalohany teto Shanghai.
Nandritra ny am-polony taona maro, ny Vondrona Lufthansa dia nanolo-tena amin'ny politika maharitra sy tompon'andraikitra tompon'andraikitra ary mandray andraikitra lehibe. Ny Vondrona dia tapa-kevitra mafy amin'ny fiaramanidina mifanaraka amin'ny toetrandro, manohy manambola amin'ny fiaramanidina mahomby amin'ny solika na eo aza ny toe-javatra miavaka ankehitriny, ary manitatra hatrany ny fandraisany anjara amin'ny sehatry ny Sustainable Aviation Fuels -Lufthansa Group dia mandray andraikitra.